Saraakiil u hadashay dawlada federaalka ah ee Somaliya oo beeniyey in Kenya ay ciidamo qoris ka samaysay Gedo. – Radio Daljir
Saraakiil u hadashay dawlada federaalka ah ee Somaliya oo beeniyey in Kenya ay ciidamo qoris ka samaysay Gedo.
Oktoobar 21, 2009 12:00 b 0
Doolow, Oct 21 – Mas’uuliyiin ka tirsan dawalada federaalka ah ee Somaliya Oo iyagu ku sugan degmadda Doolow ee gobolka geddo ayaa Waxay ka hadleen Warar Wayadaan laysla dhaaf dhaafayey oo ahaa ciidamo qorista ka socota Kenya ay soo gaadhay gobolkaasi Geddo.
Sarkaal Sarre Oo ka tirsan Dawladda hadana ku sugan degmadda Doolow ayaa Waxaa uu Saxaafadda u xaqiijiyey in ay jiraan Ciidamo lagu Tababarayo kenya kuwaas laga qoray dhulka ay somalidu degto ee kenya hasse yeeshe aysan jirin in Ciidama qoristaasi soo gaadhay Dowlow iyo Caabudwaaq ee Gobolkaasi.
Afhayeenka Ciidamadda dowladda ku meel gaarka ah ee somalia ee degmadda doolow Cabdi barre aya Saxaafadda u Cadeeyey in ay jirto arintaasi lakiin aysan is qoristu weli ka bilaaban degmooyinka somalia balse ay ku egtahay oo keliya degmooyinka ay ku nool yihiin somalida qaxanootiga ee waddanka kenya.
Hadalka Cabdi barre ayaa Waxaa uu ku soo beegmayaa Xilli mudooyinkii ugu dambeyey la soo sheegey in ay jiraan ciidamo loo Tabarayo dowladda somalia hasse ahaate ay kenya iyo dowaladda somalia intaba Waxma kama jiraan ku Tilmaameen Arintaasi Waxaase Xaaladu Fashilantay markii la sheegay in is qoristu ka bilabaay deegano ka Tirsan Gobolka geddo.
Abdirahman mohamed koronto,
Idaacadda Daljir – Garoowe
Dadweynaha reer Puntland oo si diirran u soo dhaweeyey heshiis beeleedkii Igdhays.
Markabkii Shiinaha ee laga qabsaday meel ka fog biyaha Somaliya oo Xaradheere meel u dhaw la keenay.